တပတ်အတွင်း သိသာတဲ့ ရလဒ်ကို ရရှိနိုင်မယ့် Laboratories Resurfacing Skin Paste!!! | CosmeticMyanmar
Home » Article » တပတ်အတွင်း သိသာတဲ့ ရလဒ်ကို ရရှိနိုင်မယ့် Laboratories Resurfacing Skin Paste!!!
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။ ဒီနေ့မှာတော့ No7 မှ အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ Skin Paste လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Paste လေးဟာ အသားအရောင်ကို ပြန်လည်ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့အပြင် ချွေးပေါက်များကို ကျဉ်းစေနိုင်ဖို့ရန်အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အသားအရေကို ကြည်လင်ပြီး ချောမွေ့စေဖို့ရန်အတွက် Glycolic, Glucano-delta-lactone နဲ့ Fruit Acids တို့ကိုထည့်သွင်းဖော်စပ်ထားပါတယ်။ အသုံးပြုပြီးပြီးချင်း ၁၅ မိနစ်အတွင်းမှာ အသာအရေကြည်လင်ပြီး ညီညာချောမွေ့တဲ့ အသားအရေကို ရရှိမှာပါ။ ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် တပတ်အတွင်း ချွေးပေါက်တွေ သက်သာလာတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ သတိထားရမယ့်အချက်ကတော့ Skin Paste နဲ့မျက်နှာ သန့်စင်ထားတဲ့နေ့မျိုးမှာ Sunscreen တမျိုးမျိုးကို မဖြစ်မနေ အသုံးပြုပေးသင့်ပါတယ်။
Skin Paste အသုံးပြုပုံကတော့ သန့်စင်ထားတဲ့ မျက်နှာပြင်အနှံ့ သင့်တင့်တဲ့ပမာဏယူပြီး မျက်လုံး၊ မျက်ခုံးနဲ့ ပါးစပ်တဝိုက်ရှောင်ရှားကာ အသုံးပြုပေးရပါမယ်။ ၁၅ မိနစ်အကြာမှာ အဝတ်ပါးစတခုကို ယူပြီး ရေနွေးနွေးထဲစိမ်ကာ မျက်နှာအနှံ့ အဝတ်ဖြင့်သုတ်ပြီးသန့်စင်ပေးရပါမယ်။ ပြီးနောက်မှာတော့ ရေအေးကို အသုံးပြုကာ မျက်နှာအနှံ့သန့်စင်ပေးရပါမယ်။ တပတ် ၂ကြိမ်-၃ကြိမ် အသုံးပြုပေးခြင်းအားဖြင့် ချွေးပေါက်ကင်းတဲ့အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် 23$ ကျသင့်ပြီး Branded Online Shopping တို့မှာ မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ အရေအသွေးအားဖြင့် ကောင်းမွန်ပြီး ဈေးနှုန်းလည်း သင့်တာကြောင့် သုံးစွဲလိုသူတွေအနေနဲ့ အမြန်မှာယူထားမှ စိတ်ချရမယ်နော်။
Image Source: www.no7beauty.com
Tags: skin paste